समाचार Archives - Page 1145 of 1215 - Dainik Online Dainik Online
कुलमान घिसिङद्वारा आँखा दान गर्ने घोषणा
बलि दिन खोजिएकी युवतीको यस्तो भोगाई
काठमाडौं । बलि दिन भारत लगिन लागेकि एक युवतीले परिवारका सदस्यसँगको कुराकानीले आफूलाई बचाएको बताएकि छन् । २ दिन अघि प्रहरीले ती युवतीलाई विराट नगरबाट उद्धार गरेको थियो । प्रलोभन
काका र फुचुङ्ग्री : उफ ! के के सोध्छे यो फुचुङ्ग्री पनि ???!!!
लल्लुराम फुचुङ्ग्री : सभामुख कृष्णबहादुर महरा अंकलले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि हाम्री उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे अन्टी बुरुक्क उफ्रेर सभामुखको कार्यकक्षमा गएर रातदिन सभामुखको कुर्सीमा बस्नु भो रे । आखिरमा उहाँ पनि
सडकका होडिङ बोर्ड हटाउने कार्य रोक्न व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौं । साइनोज एसोसिएसन नेपालले बोर्ड तथा होडिङ बोर्ड हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको छ । ७५ हजार भन्दा बढी युवाहरु बेरोजगार हुने भन्दै साइनोजले सरकारको उक्त निर्णय
सडकमा मागेर नबस्न महानगरको अनुरोध
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा मागेर गुजारा चलाउनेका लागि बस्न नपाइने सन्देश दिन सचेतनामूलक अभियान शुरु गरेको छ । कामपाले आज नेपाल प्रहरी, मानवसेवा आश्रमसहित सरोकारवालाको साथ लिएर अभियान थालेका
काठमाडौं । केही दिनदेखि उपत्यकाको तापक्रम निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज शून्य दशमलव ६ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । यो काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको
सरकारले सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई कारवाही गर्न सकेन : नेता नेपाल
काठमाडौं । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफैले बनाएको ऐन नियमको अक्षरस पालना गराउने सन्र्दभमा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पारिवारिक निजी
शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा प्रहरी जवानको शव फेला
विराटनगर । विराटनगरमा प्रहरी जवान सञ्जिव खड्काको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ । शुक्रबार दिउसो खड्का कार्यरत वडा प्रहरी कार्यालय 'क' को शौचालयमा शव भेटिएको हो । शौचालयको चुकुल
कुलमान घिसिङ र सन्दुक रुइत सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ग र आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत हेमबहादुर मल्ल सम्मान बाट सम्मानित हुनुभएको छ। शुक्रबार काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्ग
सरकारले बुढीगण्डकीको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर